Isiqophi ukusingathwa ngamunye athole umsebenzisi Inthanethi ukuze ithuba lokuba inkanyezi kwesikrini cishe ngokoqobo. Akuwona wonke umuntu can kumnandi ukubhala, futhi uma leso sikhathi idayari kwaba notebook ipeni, manje ukuthi kwande ukuthi kube i-akhawunti ibamba Diaries siqu kusuka "Phila Journal" kuzindawo ezincane. Vlogs kuyinto blog efanayo, kodwa main ingxenye ingxenye okuqukethwe umbhalo, nevidiyo. Ubani ongaba vlogerom, futhi indlela umsebenzi onzima?
I Vlogs sihluke ibhulogi?
Ngokwengxenye enkulu azikho umehluko oyisisekelo. Ngendlela efanayo, njengoba ibhulogi inethiwekhi elula, Vlogs kungenziwa enikelwe nokuphila kwangasese, ekuphileni kwansuku zonke, izingxabano zezombangazwe, imicimbi yamasiko, travel nanoma yini enye. Videoblogs njengoba enjalo engu-hhayi ngakho eziningi - baba ethandwa azungeze 2005. Uma kulo mbuzo oku "Vlogs - kuyini futhi kanjani ukujoyina lombhalo esikhethiwe" ingathiwa ngempela okunengqondo, kodwa manje wonke umsebenzisi Inthanethi unekhono lobuchwepheshe ukuvula isiteshi lalo.
Ethandwa kakhulu isiqophi ukusingathwa kufanelekile ukuvula Vlogs zabo, i-YouTube. Kuyinto ku le nsiza izethameli yakhula kakhulu, ukusebenza elula. Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile le nsiza kungenzeka ukuvula isiteshi mahhala, i-Google Corporation inikeza abasebenzisi nge ithuba uthole zikhangisa.
Uba kanjani vlogerom?
Ukuze eyakho isiqophi blog, udinga ukuchaza imigomo. Uma nje ifasitela emhlabeni futhi kuyindlela elula kakhulu ukuveza imicabango kanye nakho, bese empeleni Vlogs - kuyinto Analogue of idayari siqu. Kuyaphawuleka ukuthi abanye abantu bayakwazi ukwethula ulwazi zijabulisa kwansuku ukuthi kancane kancane bakha ibutho lalo labalandeli.
Kwezinye izimo, Vlogs ufuna ukuthandwa siqu noma ukukhuthaza abanye imibono. Ngokwesibonelo, ngo-2007 kwaba khona ngowokuqala ubuhle-Vlogs. kumdlali Michelle Phan okulula ukusiqonda kumnandi wabelane izimfihlo ubuhle, izindlela ukwakheka isicelo. Manje, ezibuza ngalokho Vlogs, ungathola yonke show, sisebenza iqembu abasunguli, behlanganiswe ezihlukahlukene imibono.
Vlogery ukudubula amavidiyo ngokoqobo konke - kusuka amakhekhe izindlela rainbow trout. Bona ukugxeka-movie, amabhuku, namanye ukudluliswa vlogerov, kukhona top-of-umbono kunoma iyiphi ndaba futhi ngandlela-thile zakha mncintiswano ithelevishini enempilo futhi akha wesintfu kanye zendabuko.
Bekungeke ihaba isitatimende ukuthi kubaluleke kakhulu kunokuba indlela ukukhipha ividyo kliphu, onjani imishini ngayo nefunda ngayo lisuswe. Nakuba kunezinkolo eziningi snobs lobuchwepheshe phakathi vlogerov, futhi izigcawu ezinkulu esingu kunoma iyiphi idivayisi Ungarekhoda vidiyo. Kakade, imuphi Vlogs? Lena ngokuyinhloko indaba ngokuthize, kunokuba ngomzamo ngizibonge ikhamera entsha. Isibukeli kubaluleke ngaphezu obuphelele isiteshi Umbuso kuka amagama amasu ngalo is wadala. Isiqophi ethunjwa esakhelwe futhi ehlukile-Web amakhamera ngaphambili ikhamera smartphone, ikhamera yedijithali noma zobuchwepheshe zanamuhla zobuchwepheshe.
ebaluleke kakhulu kangakanani ukuhlela abaphendula ngokunengqondo. Uma ungakwazi ukuphuma yonke imisindo extra kokungabaza, ukuphindaphinda kanye nezikhathi ukungaqiniseki, ividiyo akuyona nje esifushane kanye ashukumisayo ngaphezulu futhi kangcono. Ukwelashwa engenziwa sanoma yisiphi sevidiyo, kuze elula-Windows Movie Maker ukuze ahlelwe komugqa. Uma ngisho kancane enawulungiselelwa ukudubula ke izibuyekezo kuzodinga hhayi okuningi kangaka njengoba kubonakala.
Vlogs - kulula
Inhlolo-vo elincane phakathi izivakashi ku-YouTube ebonisa ukuthi umbukeli njalo ubona ukungabi qotho we uMdali vidiyo. Kwabaningi vlogerov nje yokwenza imali, futhi ikhamera yevidiyo waphakamisela nerejista ezicashile kancane ngesakhiwo. Kodwa uma umdali ubumnandi ehilelekile ingane yabo, kuyoba Vlogs ezithakazelisayo ngempela. Vlog uyakwazi ukuthelela intshiseko ethandwa kangaka iziteshi ezehlukene thematic anikezelwe wokujikeleza, ubuhle noma yokufunda.
Ngokwanele ukuze ube nesifiso sokuxoxela abanye ulwazi lwabo kanye nakho, futhi ungadala Vlogs kusihloko esithandayo. Isiqophi ibamba unekhono ukuncoma ividiyo ezinezihloko kulabo basebenzisi abafuna amavidiyo ezihlokweni eziqondile, nhlobo nezilaleli ukuhlala cishe kungenakwenzeka, ikakhulukazi uma ukudubula izinto ezithakazelisayo.
Indlela ukudala i-akhawunti yesibili ku "Instagram": imiyalelo enemininingwane
Erythropoietin. erythropoietin womuntu isakhi sokuzakhela
St Kirill Aleksandriysky. Isithonjana St. uCyril
Uhlelo ICQ: ukuthi kuyini futhi kungani kudingeka
Izimfihlo zokudoba: bahalele ukuqhuma
ERR_INSECURE_RESPONSE: yini leli phutha futhi kanjani ukukulungisa?